Uphando nge-TRF | Isiseko soMvuzo: Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Ngathi Uphando lwe-TRF
Iqela kwi-Foundation Reward libandakanya uphando kunye namaqabane ase-UK nase-USA. Sisebenza ngokubambisana neengcali ze-neuroscience kwiiyunivesithi eziphezulu kunye neengcali zokulutha kwizonyango zesitalathisi. Nanku uphando olusisiseko olupapashwe ngalo. Konke kwiphephancwadi ehlaziywe ngontanga.
Imanifesto yemifanekiso engamanyala
Elinye lamaphepha ethu e-Yokohama ngoku lipapashwe kufikelelo oluvulekileyo, ijenali elijongwa ngoontanga. Eli phepha li Ukulungelelanisa "i-Manifesto yenethiwekhi yophando yaseYurophu ekusebenziseni ingxaki kwi-Intanethi" kunye neeMfuno zaBantu abaPhakathi abaNtu abaziingcali kunye nabaThengi abaChaphazeleka kukuSetyenziswa ngokuNgcono kweP iphonografi. Ibeka iingcebiso ze-TRF zophando olufunekayo kule minyaka ilishumi izayo. Ubunzulu ibali ephepheni apha.
NgoJuni ka-2019 i-TRF yaziswa kwinkomfa ye-6 ye-Yokohama, eJapan. Sahambisa amaphepha amabini adibeneyo kweli candelo Ukuziphatha kobuxhatshazo kunye nezinye iindlela zokuziphatha ngokugqithisileyo. UMary Sharpe wathetha Imingeni yokufundisa abafundi besikolo malunga nophando lokuziphatha kakubi. UDarryl Mead uyanikezelwa Ukuguqula iManifesto kwintsebenziswano yophando lwaseYurophu kwi-Intsebenziswano ye-Intanethi kunye neemfuno ezahlukeneyo zoluntu kunye noluntu lwabantu abachaphazelekayo abanokusetyenziswa kakubi kweefotoliyo.
Impapasho yethu yakutshanje Iifografi kunye nobulili Amaphepha oPhando kwiNgqungquthela ye-5th International kwiingxaki zokuziphatha. Le nkomfa yabanjwa eCologne, eJamani ngo-Ephreli 2018. Eli phepha lapapashwa Ukunyanzela ngokwesondo kunye nokunyanzelisa kwi-intanethi kwi-18 Matshi 2019. Sinokunika unxibelelwano kwinguqu epapashwe isicelo. Ikopi ebhaliweyo yesicatshulwa sinokufumaneka Uphando.
Ingxelo yenkomfa esuka eCologne ibhekise inkulumo yethu yokuqala kule ntsimi. Kwakukho Ukunxibelelana nenzululwazi yokulutha kwe-intanethi kwi-audiences wider.
Eli phepha lenziwe Iifografi kunye nobulili Amaphepha oPhando kwiNgqungquthela ye-4th International kwiingxaki zokuziphatha. Yapapashwa kuyo Ukunyanzela ngokwesondo kunye nokunyanzelisa kwi-Intanethi nge-13 Septemba 2017. Yavela ngokushicilelwa kuMqulu 24, iNombolo 3, 2017. Iinkcukacha ezithe kratya kubandakanya uphononongo kunye nezinto ezingafumanekiyo ziyafumaneka kwi TRF Blog. Ukuba ungathanda ikhophi yale nqaku, nceda ubhalele kuthi Dibana no ngasezantsi kweli phepha.
I-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi kunye noThutho lweSondo
UMary Sharpe, iGosa eliyiNtloko eliLawulayo leSiseko soMvuzo, ubhale isahluko kunye noSteve Davies weLucy Faithfull Foundation. Ibizwa ngokuba yi "Internet Flow Model kunye ne-Sexual Offending". Isahluko sivele kwi Ukusebenzisana Nabanye abaye benza iziTyala zoSondo: Isikhokelo sabaSebenzi. Oku kwapapashwa nguRoutledge ngoFebruwari 2017 kwaye kunokuthengwa Apha. Unokufunda kwakhona ifayile ye- ibali ngayo.
UGqr Darryl Mead, owayenguSihlalo weReward Foundation ngelo xesha wapapasha iphephaImingcipheko abantu abatsha abajongana nayo njengabaThengi beTyala ”. Oku kwapapashwa I-Addicta: I-Turkish Journal yeziLungiso ngasekupheleni kwe-2016 kwaye itekisi epheleleyo iyafumaneka mahhala.
Nge-Agasti ka-2016, uGary Wilson, igosa lophando elihloniphekileyo kwi-The Reward Foundation, wabhala iphepha kunye noogqirha abasi-7 base-US Navy kunye noogqirha bezigulo zengqondo elapapashwa kwijenali ethi "Behavioural Sciences": Ngaba iinthombe zoononopasho ze-intanethi zibangelwa izidakamizwa zesondo? Ukuphononongwa ngeeNgxelo zeKlinikhi"Ifumaneka ngokukhululekile kwi ZeNzululwazi website. Nguwo okudume kakhulu iphepha eliye lapapashwa kwiSayensi zoBomi.
UGary Wilson ubhale iphepha eliphambili lokubeka ulwalathiso kuphando lwexesha elizayo kwicandelo lokwenzakalisa amanyala. Yi "Susa imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi Sebenzisa ukuBhengeza iZiphumo zayo" kwaye yapapashwa Addicta, I-Turkish Journal yeziLungiso, kwi-2016. Ikhonkco inika ukufikelela okukhululekile ekufundweni ngokupheleleyo.